« Lozam-pifamoivoizana roa no nitranga ka roa no naratra. 2 ny hala-botry, telo nosamborina nentina hatao fanadihadiana. Mikasika ny teo Analakely sy ny manodidina, vehivavy iray voatoraky ny asidra, Lehilahy lehilahy iray hafa voatataky ny antsy ny tarehiny», araka ny vaovaon’ny polisy. Nanampy fanazavana moa ny mpitandro filaminana fa olona no nitatitra tany amin’ny polisy ireo tranga ireo raha ny vaovao omaly hariva.
Raha ny vaovao teo amin’ny HJRA, tsy nahitana narary na maty vokatry ny faharesen’ny Barea. « Avy nitety ny sampandraharaha rehetra tany aho, hatrany amin’ny fameloman’aina sy ny vonjiaina ary ny tranom-paty fa tsy nisy fiakarana tosidra mihitsy halina(ndlr alakamisy alina). Tsy nahitana toran’ny fibobohana zava-pisotro mahamamo ihany koa. Mahay resy ny Malagasy tamin’ity ampahefa-dalana tamin’ny CAN 2019 ity, nahay nampionona ny fo ihany koa ka tsy nisy vokadratsiny tamin’ny fahasalamana tahaka ny tebiteby teo aloha tamin’ny ampahavalon-dalana», hoy ny Tompon’andraikitry ny serasera eo anivon’ny hopitaly HJRA Ampefiloha, Alexandre Ratolojanaharimanana.